के हिरो र निर्मातालाई साम्राज्ञी चाहिन्छ ? – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsFeature Newsके हिरो र निर्मातालाई साम्राज्ञी चाहिन्छ ?
के हिरो र निर्मातालाई साम्राज्ञी चाहिन्छ ?
September 12, 2018 sutraentertainment Feature News, Gossip, News 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट – पहिलो फिल्म ‘ड्रिम्स’ चल्नु अघि अभिनेता अनमोल के.सीले हलसम्म दर्शक ताने । ‘ड्रिम्स’ चलेपछि डेब्यू अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले माहोल बनाइन् । साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको क्रेज पहिलो फिल्मले नै बढाएको हो ।
ए मेरो हजुर २, तिमी सँग र कायरासम्म आइपुग्दा उनी बढ्दो माग भएकी हिरोइन बनेकी छिन् । १० लाख रुपैयाँ दिएर निर्माताले साम्राज्ञीलाई सिनेमामा लिन चाहेका छन् । तर, साम्राज्ञीले १० लाख रुपैयाँ लिएर काम गरेको कायरा सिनेमा नै व्यापारिक रुपमा चलेन । साम्राज्ञीले नै यो कुरा स्विकार गरेकी छिन् ।
तर, साम्राज्ञीलाई अहिले नेपाली फिल्ममा उनको माग खुबै भएको लाग्छ । हरेक दिन आफूलाई नयाँ सिनेमाको अफर आउने गरेको साम्राज्ञीले बताएकी छिन् ।
पोखरा पुगेर इन्टु मिन्टु लण्डनमाको प्रचार गरेकी साम्राज्ञीलाई अभिनेता अनमोल केसी बाहेक अरुसँग तपाई चल्नु भएन भनेर पत्रकारले प्रश्न सोधेका थिए । तर, साम्राज्ञीले यसमा पत्रकारलाई भनिन्–‘तपाइको प्रश्न नै गलत छ । अनमोल विना म होइन, हिरो र निर्मातालाई म चाहिन्छ ।’
साम्राज्ञीले स्टारडम नघटेको पनि बताएकी छिन् । साम्राज्ञीको यो भनाइलाई फिल्म पण्डितहरुले उनमा बढेको घमण्डको रुपमा हेरेका छन् । साम्राज्ञीविना के निर्माताको लगानी सुरक्षित नहुने र हिरोको करिअर नै नजोगिने अवस्था आएको हो र ? उनले यसप्रकारको जवाफ दिएकी छिन् ।
samragyee rl shah new movie
फिल्म ‘छक्का पन्जा ३’ पहिलो कन्सर्ट पशुपतिमा
बसुन्धरालाई लाईफटाईम, भुवनलाई सम्मानका साथै पत्रकारद्धय सामिप्य र श्रीधरलाई पुरस्कार
September 17, 2018 sutraentertainment Gossip, Kollywood, News 0
अभिनेता आर्यन अधिकारीलाई के म तिम्रो होइन र बाट दर्शकले चिनेका हुन् । तर, बटरफ्लाइसम्म आउँदा त उनलाई दर्शकले विर्सिए । आर्यनको नाममा हलमा दर्शक जान्छन् भन्न सकिन्न ।अभिनेत्री श्रृष्टी श्रेष्ठलाई दर्शकले मिस नेपाल भएपछि […]